श्रोत साधन अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ – erupse.com
श्रोत साधन अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ
एक महिना अगाडि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशन भएपश्चात् कक्षा ११ को भर्ना पनि सुरु भैसकेको छ । यसै सन्दर्भमा कक्षा ११/१२ को अध्ययन, विगतमा परीक्षाको उत्तीर्ण दर, वर्तमान शैक्षिक अवस्था, परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय तहको भूमिकालगायत विषयहरुमा म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारमा सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसँग हामीेले कुराकानी गरेका छौं । यसै सिलसिलामा म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस÷उच्च माविका प्रमुख टिकाराम सापकोटासँगको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
एसइईको नतिजालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
एसइईको नतिजामा त्यस्तो ठूलै परिवर्तन केही पनि देखिँदैन । लेटर गे्रडिङ प्रणालीले गर्दा एउटा विषयमा अनुत्तीर्ण भए पनि आपूmलाई चाहना भएको अन्य विषय लिएर अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सकिने अवसर आएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यस प्रणालीले स्वभाविक रुपमा उत्तीर्ण प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । तर, यस पद्धतिको परिणामूखी नतिजाको विश्लेषण गर्ने हो भने यसले खासै उत्साह थपेको जस्तो लाग्दैन किनकी यस प्रणालीमा जुन किसिमको व्यवहारिक र प्रयोगात्मक उन्मुख पाठ्रयक्रम र शिक्षण पद्धतिको विकास हुनुपर्छ त्यो हुन अझै बाँकी छ । अर्को कुरा प्रयोगात्मक नम्बर छुट्याइएका विषयहरुमा पनि लगभग सबै विद्यार्थीलाई पूर्णाङ्कै हालेर पठाउने गरिएको पाइएको छ । यस्तो कार्यले एकातिर गे्रडिङ प्रणालीको भावनालाई बिर्सेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ शिक्षकको पेशागत नैतिकता माथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको दखिन्छ । त्यसैले यस वर्षको नतिजालाई छुट्टै रुपमा हेर्ने कुरा मैले खासै केही देख्दिन । पुरानै कुराको निरन्तरता मात्रै छ ।
अबको शैक्षिक जनशक्ति कस्तो हुनुपर्दछ ?
अबको शैक्षिक जनशक्ति व्यवहारिक, उद्यमशील, उत्पादनशील, सीपयुक्त, अनुसन्धानमुखी, सकारात्मक सोचयुक्त, मातृभूमीपे्रमी, मनवताप्रेमी, मितव्ययी र जिज्ञासु हुनुपर्दछ । देशले आफै काम गर्दैन । यो अमूर्त हो । काम गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । यस्तो जनशक्ति निर्माण गर्न दुइवटा कुरामा परिवर्तन अवश्यकता पर्दछ, संस्कार र शैक्षिक पद्धति । संस्कार परिवार र समाजले सिकाउँछ भने ज्ञान शैक्षिक संस्थाहरुमार्फत प्रदान हुन्छ । व्यक्ति त जहिले पनि सामाजिक मूल्यको पछाडि दौडिरहेको हुन्छ । अहिले हेर्दा नेपाली समाज पैसाको पछि दौडेको देखिन्छ र सरकारले पनि यसलाई समर्थन गरेको छ किनकी यसले देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी यहाँको स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नुको सट्टा नयाँ–नयाँ वैदेशिक रोजगारिका गन्तव्य खोजिरहेको छ । यस्तो संस्कार र परिपाटीबाट माथि भनिए जस्तो शैक्षिक जनशक्ति तत्काल उत्पादन हुने कम सम्भावना छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा तपार्इंले सोचेको परिवर्तन कस्तो हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
नेपालको अपार जलस्रोत, जडिबुटी, कृषि, खनिज पदार्थको उपयोग गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने शैक्षिक संस्था स्थापना हुन् भन्ने मेरो सोचाई हो । बाँकी कुरा मैले अघि नै उल्लेख गरिसकें ।
राज्यले शिक्षामा गर्नुपर्ने परिवर्तन के–के हुन सक्छन् ?
सबभन्दा योग्य व्यक्तिको रोजाई शिक्षण पेशा हुने वतावरणको सिर्जना, अन्य विषय पढ्न नपाए पनि शिक्षा समूहमा पढ्न पाउने प्रथाको अन्त्य, राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षक भर्ना गर्ने कार्यको अन्त्य तथा विभिन्न स्थानहरुमा प्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्छ ।
हालै प्रकाशित कक्षा १२ को नतिजा कस्तो पाउनुभयो ?
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको कुरा गर्नुभएको हो भने कक्षा १२ को नतिजाबाट हामी उत्साहित नै छौं । करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा नतिजा आएको छ । सामुदायिक क्याम्पस भएको नाताले हामीले सबै स्तरका विद्यार्थीहरु भर्ना गर्छौं । हाम्रो मिहिनेत र विद्यार्थीको लगनशिलताले सो परिणाम आएको हो । समग्र कुरा गर्दा एसइई झैं कक्षा १२ मा पनि गे्रडिङ प्रणाली भएकोले नतिजामा सुधार आएको छ । अब हामी गुणस्तर सुधारतर्फ लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण एसइई तथा कक्षा १२ उत्तीर्ण भाइबहिनीहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु । यी तह भनेका व्यक्तित्व विकास गर्ने प्रस्थानविन्दु हुन् । सही समयमा सही निर्णय गर्न सकियो भने सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । कक्षा ११ का लागि यदि बेनीमा आउनुहुन्छ भने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस सबै कोणबाट उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था हो जस्तो लाग्छ । स्नातक तह (बि.ए, बि.बि.एस र बि.एड) मा पनि भर्ना खुलेको छ । यसका लागि पनि क्याम्पस यस क्षेत्रकै निर्विकल्प शैक्षिक गन्तव्य हो भन्दा अन्यथा नहोला । अर्को कुरा क्याम्पस गुणस्तर सुधारको प्रक्रियामा तीव्र गतिमा लागिरहेको यहाँहरुले महशुस गर्नुभएकै छ । निकट भविष्यमै क्याम्पसले त्तब्ब् ९त्तगबष्तिथ ब्ककगचबलअभ बलम ब्अअचभमष्तबतष्यल० प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दैछ । यो भनेको गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन अर्थात् क्याम्पसका सबै सेवासुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मादण्ड अनुरुप छन् भन्ने हो । त्यसैले तपार्इंहरुकै अग्रजहरुले स्थापना गरेको यस क्याम्पसलाई हामी सबै मिलेर फलाऔं र फुलाऔं भन्न चाहन्छु । साथै मेरा विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र रुप्से दैनिक परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।